Netwọk mmekọrịta kacha mma eji na Spain | ECommerce ozi ọma
Taa intanetị jupụtara n'ọtụtụ ohere na-enweghị ngwụcha nke ohere anyị nwere maka ntụrụndụ, azụmahịa, wdg. Agbanyeghị, enweghị obi abụọ ọ bụla na ụfọdụ nyiwe kachasị ewu ewu na nke a na-ewu ewu netwọk mmekọrịta. Ma n'ihi mkpa nke niile ohere nke netwọkụ mmekọrịta na-enye anyị ohere, ajụjụ na-ebilite: Gịnị bụ netwọk mmekọrịta na-ejikarị na Spain?
Mana tupu anyị agawa ịza ajụjụ a, anyị ga-edo anya mgbagha ọzọ:Gini mere anyi ji agha ileba anya bu ndi kachasi eji eme ihe? Azịza ya nwere ike ịdị iche dabere n’echiche ị chọrọ ile n’isiokwu a, mana ụfọdụ nhọrọ bụ: inwe ike imezu. mgbasa ozi mgbasa ozi, maka ebumnuche nyocha, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Isi ihe ọzọ anyị ga-edo anya bụ na ihe omuma banyere isiokwu a di ike, n'ihi na mkpa ahịa na-aga n'ihu na nhọrọ nke nke ọ bụla n'ime netwọk mmekọrịta dị iche iche na-enye ndị ọrụ ya ịgbanwe ngwa ngwa; ma, n’isiokwu a anyị ga-elekwasị anya na iji ozi kachasị dị ugbu a eme ihe.
Anyị maara nke ọma na ụfọdụ n'ime netwọk mmekọrịta na-ejikarị na Spain nwa Facebook, Twitter, Instagram na WhatsApp. Mana tupu ịgbakwunye aha ndị ọzọ na ndepụta ahụ ma banye n'ụzọ zuru ezu na nkọwa nke ihe kpatara netwọlị ọ bụla ji nwee ebe dị na ndepụta a, ka anyị tụlee ndị na-ahụ maka ịme otu netwọkụ mmekọrịta ndị a ma ama, ndị ọrụ Internetntanetị.
1 Onye na-eji soshal midia?
2 Kasị ewu ewu na-elekọta mmadụ na netwọk na Spain
3 Netwọk mmekọrịta mmadụ na-eto ngwa ngwa
4 Netwọk mmekọrịta nke anyị na-etinyekwu oge
5 Ihe anyị na-eyi n’ahụ́ ọ na-agbanwe site n’afọ ndụ anyị?
6 Kedu ihe anyị na-eme na soshal midia?
Onye na-eji soshal midia?
Ka anyị malite site na ọnụ ọgụgụ izugbe kachasị na-ekwu na na Spen, ọ dị obere karịa 19 ọtụtụ nde ndị ọrụ; nke a putara na a 86% nke ndị bi na ya bụ onye ọrụ nke otu netwọkụ mmekọrịta nke dị na ịntanetị. Nanị nọmba a na-awụ akpata oyi n’ahụ, ebe ọ na-enye anyị echiche ọnụọgụ ndị mmadụ na-emekọrịta ugbu a site na netwọkụ mmekọrịta.
Akụkụ nke abụọ iji gosipụta bụ nke ndị ọrụ niile nọ ebe ahụ, ndị afọ atọ ahụ ndị nnọchi anya ọzọ bụ:
Ndị ọrụ ahụ nọ n'agbata 16 na 30 afọ
Ndị ọrụ n'etiti afọ 40 na 55
Na ndị nọ n’agbata afọ 56 na 65
Ọzọ na-akpali ebe bụ na, ọ bụ ezie na taa na ọtụtụ ndị ọrụ nọ n’ọgbọ dị afọ iri na isiiKa oge na-aga, ọtụtụ ụmụaka na-ejikwa netwọk mmekọrịta ndị a. N'aka nke ọzọ, ọnụ ọgụgụ ndị toro eto na-esonye na netwọkụ mmekọrịta na-arị elu nke ukwuu.
Kasị ewu ewu na-elekọta mmadụ na netwọk na Spain
E nwere ụlọ ọrụ abụọ ndị togoro ndepụta ahụ ogologo oge, ma ha ka bụ ndị kachasị ewu ewu: Facebook na Twitter. Ndị a netwọk abụọ bụ ndị kasị ewu ewu Maka ebumnuche dị mfe, ha bụ ndị na-eweta ọtụtụ iche maka ndị ọrụ ha, n'ihi na ndị ọzọ netwọk mmekọrịta dị ka LinkedIn ma ọ bụ Spotify ha na-elekwasị anya na ngalaba ahịa akọwapụtara nke ọma, Facebook na Twitter dị ọtụtụ.
N'ime netwọkụ mmekọrịta abụọ a anyị nwere ike ịchọta ọdịnaya dị iche iche, site na egwu, site na akụkọ, na ọbụlagodi egwuregwu.
N'ihi ọdịnaya a dịgasị iche iche na-abịa mmetụta na-esonụ. njirimara njirimara.
N'ụzọ dị otú a netwọkụ mmekọrịta kacha ewu ewu ma maka ndị ọrụ nkeonwe na maka ụlọ ọrụ. Ọ bụghị ihe ijuanya na Facebook na Twitter nwere ikikere 99 na 80% kwekọrọ na ya.
Ka anyị banye n'ime ntakịrị ihe zuru ezu netwọk mmekọrịta abụọ; ka na-amalite na Facebook, netwọkụ mmekọrịta na-akwụ ụgwọ ya maka ewu ewu ya Kedu? N'ihe doro anya karị, enwere ike ịkọwa ya dị ka ndị a: n'ihi na ọtụtụ mmadụ na-eji netwọkụ mmekọrịta a ma nwee profaịlụ, ha na-agba ndị ọzọ ume ịmepụta profaịlụ iji nweta ọdịnaya nwere ike ịmasị ha.
Na usoro nke Twitter Anyị nwere ike ikwu ya na ịdị mfe nke ọ dị ibunye onye ọrụ ozi na obere oziỌ bụ ihe na-amasị ndị mmadụ nke ukwuu, n'ihi na a na-ebufe ozi ndị ahụ n'otu ntabi anya; nke na-eme ka ọ dị mfe iji ma dịkwa oke irè mgbe ị na-anwa ibufe ozi, na-ejide n'aka na ọ ruru ndị niile na-eso ụzọ anyị.
Netwọk mmekọrịta mmadụ na-eto ngwa ngwa
Ihe ndị a netwọkụ mmekọrịta abụọ dị n’elu ndepụta tinyere Facebook na Twitter, ma ekwesịrị ịmatakwara na netwọkụ mmekọrịta ndị a etolitela maka ekwuru. Nke mbụ anyị ga-ekwu banyere ya bụ Instagram, netwọkụ mmekọrịta na-adabere na iji ihe oyiyi, na nke a ma ama n’ihi na ọ na-enye ndị ọrụ ohere ịkekọrịta oge ma ọ bụ ihe omume na nanị otu onyonyo ma ọ bụ obere vidiyo.
Uto nke Instagram emeela ka a karịa 30% e jiri ya tụnyere afọ ndị gara aga, nke mere ka ọ bụrụ netwọ mmekọrịta mmadụ na-eto ngwa ngwa, na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ onwe na ndị azụmaahịa.
Netwọk mmekọrịta ọzọ na ndepụta uto bụ: Spotify, na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ na netwọk par kacha mma. Netiwọ mmekọrịta a amụbaala nke ọma n'ihi na ngwaahịa ọ na-enye na-ezute otu n'ime mkpa ndị kachasị mkpa maka ndị ọrụ, yana ịbụ ihe ngwọta maka otu ọrụ kachasị dị n'ụwa, ụlọ ọrụ egwu.
Site n'ikwe ka anyị ruo ụbọchị nke akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na gburugburu egwu, na mgbakwunye na ikwe ka anyị nweta mkpokọta egwu nke nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwu niile amaara, ikpo okwu a nwere ntụkwasị obi nke ndị ọrụ ya n'ụzọ doro anya. O dokwara anya na ọ na-ewu ewu kwa ụbọchị.
Netwọk mmekọrịta nke anyị na-etinyekwu oge
Oge erugo ịkpọtụrụ elekere atọ netwọk mmekọrịta nke ndị ọrụ na-eji oge dị oke elu. Ka anyị bido na netwọkụ mmekọrịta anyị bụ Izi ozi ngwa ngwa akara ngosi, WhatsApp, Netwọk mmekọrịta a na-ewu ewu n'ihi ịdị mfe nke ọ na-eme ka otu n'ime ọrụ kwa ụbọchị nke mmadụ nwee, iji kwurịta okwu.
Ma ọ bụ ndị enyi anyị, ndị ezinụlọ anyị, ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ anyị ma ọ bụ ndị ọrụ ibe anyị, WhatsApp bụ nhọrọ mbụ anyị chere maka ijikọ ma kwukọrịta. Mfe nke ọ na-enye anyị ohere ịkekọrịta vidiyo, faịlụ multimedia, ọnọdụ anyị, wdg. Ọ na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime netwọkụ mmekọrịta anyị na-etinyekarị oge na ya. Ogologo oge ole ka anyị na-etinye na netwọkụ mmekọrịta a? Daily karịa awa 5.
Netiwọ mmekọrịta na-esote nke anyị na-etinye oge dị ukwuu bụ otu n’ime ihe ndị gosipụtakwara nnukwu uto, Spotify, ọ dịkwa mfe ịmata ihe kpatara anyị ji etinye oge dị ukwuu na netwọkụ mmekọrịta a, n’ihi na ihe niile ị ga - eme bụ pịa bọtịnụ-egwu-egwu iji nọrọ ọtụtụ awa na awa iji gee egwu, ma nke ọhụụ na nke ochie anyị.
N'ikpeazụ, netwọkụ mmekọrịta nke atọ nke anyị na-etinyekarị oge bụ Facebook, netwọkụ mmekọrịta ahụ na-akwado okpueze nke ewu ewu. Na ihe mere na anyị na-eji oge dị ukwuu bụ ihe dị mfe, niile ọdịnaya anyị nwere ike ịhụ. O zuola ịlele ekwentị anyị iji mara ma etu ọkwa a si dị ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ihe anyị na-eyi n’ahụ́ ọ na-agbanwe site n’afọ ndụ anyị?
N'ịlaghachi na afọ, anyị nwere ike ịchọta otu 3 anyị kwurula n'elu, ka anyị hụ ewu ewu nke netwọkụ mmekọrịta dabere na afọ ndị ọrụ.
Banyere ndị ọrụ nọ n’agbata afọ 16 na 30, netwọkụ mmekọrịta kacha ewu ewu WhatsApp, YouTube, Instagram na Spotify. Dịka anyị nwere ike ịhụ, oge a na-ahọrọ ọdịnaya ọdịnaya ọtụtụ.
Banyere otu ndị ọrụ dị n'etiti afọ 40 na 55, anyị nwere ike ịchọpụta na netwọkụ mmekọrịta kachasị ewu ewu bụ Instagram, yana anyị tinyekwara Waze na ndepụta ahụ, n’ihi na mfe ọ na-enye anyị ohere ịchọta ụzọ iji ruo ebe anyị na-aga na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ kachasị amasị maka ọtụtụ ndị ọrụ.
N'ụzọ na-akpali mmasị, n'etiti ndị ọrụ afọ 56-65, ndị kasị ewu ewu na-elekọta mmadụ na netwọk bụ Google+Nke ahụ ziri ezi, netwọk mmekọrịta nke Google. Nke a na-akụziri anyị na afọ iji kọwaa ruo n'ókè ụfọdụ, mmasị anyị maka nhọrọ ọ bụla dị na ịntanetị.
Kedu ihe anyị na-eme na soshal midia?
Ihe omume kachasị amasị ndị Spen ka na-abụkarị mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ya bụ, iso ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ anyị na-akpakọrịta, ma soro ha kerịta ihe omume dị mkpa na ndụ anyị. Agbanyeghị, anyị na-achọkwa ịnweta ọdịnaya multimedia, dị ka ọ dị na Instagram. Ọzọkwa, anyị Spaniards nwere mmasị na ike nweta nhọrọ ndị egwu egwu nke YouTube na Spotify nyere.
Netwọk mmekọrịta agbanweela ụzọ anyị na ndị mmadụ si ebi ndụ, agbanyeghị, ọ dị mkpa iburu n'uche na, agbanyeghị na netwọkụ mmekọrịta bụ ụzọ, njedebe ga-abụrịrị mkparịta ụka, nkwukọrịta nke a ga-elekọta ma debe. .
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » elekọta mmadụ media » Netwọk mmekọrịta kachasị eji na Spain
Kedu ihe ndị ọzọ na-ewu ewu, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ pụtara?
N'ihi na ọ ga-adị ka ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha na WhatsApp nwere nkezi nke 5 awa nke iji ụbọchị ga-abụ netwọkụ kachasị ewu ewu.
N'isiokwu a, m na-atụ uche data dịka ọnụọgụ ndị ọrụ nke netwọkụ ọ bụla, ọnụọgụ nke ntinye ma ọ bụ oge anyị na ha nọrọ.
Zaghachi Cristina Espallargas